Maitiro Ekutumira Sisitimu kana Ekucherechedza Diagnostics kuApple | Ndinobva mac
Maitiro Ekutumira System kana Spotlight Diagnostics kuApple
Zvandichataura kwauri muchinyorwa chino, ungangodaro usingafanire kuita, dzimwe nguva uye zvichienderana nezvikanganiso zvaunogona kuve nazvo paMac yako, maApple mahunyanzvi aunobata kuburikidza nefoni yebasa revatengi anokuudza ivo vanokumbira.
Ndezve kuziva izvo kwatinofanira kuenda uye izvo zvatinofanira kuita kuti titumire Apple system kana Spotlight diagnostic. Iyi mamiriro anogona kuitika kana system yako ikatanga kuve nehunhu hunhu uye pamwe, kunyangwe kuomesa michina iwe uchine kusashanda uku.
Apple inofunga nezvese zvinhu uye yakagadzirira nzvimbo musystem, kunyanya mukati me Chiitiko Monitor, kwatinogona kuisa system yedu kana iyo Spotlight system kuti iongororwe. Uku kuongororwa kunogadzira mafaira anozotumirwa kuApple kuitira kuti vashandi vakasarudzwa vaedze kutsvaga iko kukanganisa.
Kana chinhu ichi chisiri kubudirira, inguva yekuenderera nhanho inotevera, inova yekuendesa kuApple Chitoro kana yepamutemo technical service kuitira kuti chaiwo maratidziro ekuongorora akagadzirwa neApple pachawo anogona kupfuudzwa kune timu.
Kuti umhanye ma diagnostics andiri kutaura nezvawo, unofanirwa kupinda Lauchpad> Vamwe> Chiitiko Chekutarisa uye pamusoro pehwindo rinoratidzika waigona kuona bhatani rine giya. Kana isu tikabaya pane iro giya iwe uchaona iwo maviri maitiro ekuongorora.
Isu tinofanirwa kuyeuka kuti sezvo data rakawanda richizotumirwa kuApple, ivo vanoporeswa muhutano uye vanokuratidza hwindo ratinofanira kubvuma kwaunozvizivisa iwe sechibvumirano chekuvanzika cheizvo zvatiri kuenda send. Patinogamuchira maitiro anotanga, izvo zvinotora nguva yawo, uye inopedzisira yagadzira iyo faira yatinofanira kutumira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS Sierra » Maitiro Ekutumira System kana Spotlight Diagnostics kuApple
Wedzera hupenyu hwebhatiri neiyo Endurance app
MotionVXF inokupa iyo mCamRig plugin yeFinal Cut Pro X